Liverpool oo garaacday Cardiff City iyo Arsenal oo ku hor kuftay Crystal Palace +Sawiro – Gool FM
( England) 21 Abriil 2019 Kooxda liverpool ayaa guul wax ku ool ah ka gaartay Kooxda Cardiff City kaddib ciyaar ku dhamaatay 2-0.
Qeebtii koowaad ee ciyaarta labada kooxba ayaa awoodi waayey in ay la yimaadaan gool wallow Kooxda Liverpool ay ka kubad wanaagsaneed dhigooda Cardiff City.
Liverpool ayaa marar badan sameesay isku dayo goo loo maleesan karay balse midna kama aysan faa’ideysan in ay gool u badalaan.
Cardiff ayaa dhankooda door weyn ka qaatay kulanka iyaga oona iska qasaariyey fursado dhowr ah, ugu dambeen kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku dhamaaday bar-baro gool la’aan ah.
Waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Reds oo u ooman in ay mar un goolka garaana ayaa waxaa u suura gashay in ay helaan goolkooda koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga lagu magacaabo Wijnaldum kaddib caawin uu ka helay Alexander-Arnold daqiiqadii 56-aad ee ciyaarta.
Kooxda Liverpool oo ka baqdin qabtay in gool lagaa bareejeeyo ayaa ugu dambeen lagu abaal mariyey gool kulaad waxaa u ansixiyey goolkaas xidiga khadka dhexe Milner daqiiqadii 81-ee ciyaarta..
Ugu dambeen ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-0 oo ay ku badisay Kooxda Liverpool oo dib ula wareegtay hogaaminta horyaalka.
Dhica kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace ayaa ku soo dhamaaday 2-3 oo ay guushu ku raacday Kooxda Crystal Palace.
Arsenal ayaa gool loogala hormaray qeebtii koowaad ee ciyaarta waxaana goolkaas ka dhaliyey Benteke, dadaalo badan oo ay sameeyeen ciyaartoyda Arsenal waxaa ku adkaatay in ay iska soo gudaan goolka deenta.
Kulanka qeebtiisa koowaad ayaa 1-0 lagu kala maray, blase markii dib la isagu soo laabtay ciyaarta Ozil ayaa kooxdiisa u keenay goolka bar-baraha ee ciyaarta.
Crystal Palace oo wax niyad jab ah ka qaadin goolka laga bareejeeyey ayaa durba la timid labo gool oo kale, zaha ayaa dhaliyey goolka labaad ee Palace halka McArthur uu natiijada ciyaarta ka sii dhigay 3-1.
Arsenal waxaa la soo darsay xaalad adag balse dhaliyohooda ugu sareeye ee xagaagan Aubameyang ayaa u keenay kooxdiisa gool labaad daqiiqadii 77-aad ee ciyaarta, natiijada kulanka ayaana noqday 3-2.
Kooxda Crystal Palace ayaa sameesay difaacasho qurux badan iyaga oona ka dhiidhiyey in laga bareejeeyo goolka sedexaada ee ciyaarta ,ugu dambeen Kulanka ayaa ku soo idlaaday 3-2 oo ay libinta ku heshay kooxda Crystal Palace.
Mbappé oo si cad u go’aamiyay wararka xanta ah ee lala xiriirinayo ku biirista Real Madrid